Himalaya Dainik » रविन्द्र अधिकारीको ‘मन्त्री पद’ धरापमा, के राजीनामा नै देलान?
रविन्द्र अधिकारीको ‘मन्त्री पद’ धरापमा, के राजीनामा नै देलान?
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ घोटालामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि कार्वाहीमा सिफारिस गरिएपछि राजीनिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
एक अन्तर्वार्तामा बाइडबडी खरिदमा गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु भन्दै आएका मन्त्री अधिकारीले अब सन्यासको बाटो रोज्लान् ? यो प्रश्न आम सर्वसाधारणका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
आफै दोषीको दर्जामा रहेको भेटिएपछि उनी आफै कारवाहीको प्रक्रियामा आउनुपर्ने चुनौती बढेेेेपछि उनलाई मन्त्रीबाट राजिनामा दिन नैतिक दावब नै परेको छ तसर्थ उनको मन्त्री पद धरापमा परेको छ ।